Guddida Doorashadu maxay ka yidhaahdeen Doorashada Madaxtooyada? | Somaliland.Org
June 27, 2010	Hargeysa, (Somaliland.org)- Komishanka Doorashooyinka Qaranka, ayaa xisbiyada ugu baaaqay inay farogelinta ka daayaan goobaha la soo xidhay ee ay u dhamaadeen hawshii ay hayeen ee codbixinta oo ka soo cawday qaar ka mid ah xisbiyada loolanka adag ugu jira kursiga madaxtooyadda.
Guddida Doorashada oo xalay fiidkii Shir-Jaraa’id ku qabtay xaruntooda Hargeysa, ayaa sheegay in goobaha qaarkood ay ka cawdeen Xisbiyada. “Xisbiyada qaar ayaa goobuhu ay ka soo cowdeen inay culays badan ku hayaan, waxaan xisbiyada ka codsanaynaa inay joojiyaan culayska ay ku hayaan goobaha codbixinta doorashada ee wali sii shaqaynaya ee imika la soo gabo gebogebeynayo,” sidaa waxa yidhi Afhayeenka Komishanka Md. Maxamed Axmed Xirsi (Geelle), oo xalay ku dhawaaqay in gebi ahaanba dalka Somaliland ay si rasmiya uga soo gebogebowdey Codbixinta Doorashada Madaxtooyadda ee looga daareeray maanta gebi ahaan dalka oo dhan.
Af-hayeenka Komishanka doorashooyinka Md. Maxamed Axmed Xirsi (Geelle), ayaa u mahadceliyey shacabka Somaliland, ciidanka ammaanta iyo hawlwadeenadii Komishanka Qaranka. “Waxaan ugu mahad celinayaa shacbiga Somaliland ee nabadgelyada jecel ee sida fiican u coddeeyay nidaamkana u ilaalinayay, waxa kale oo aan u mahad celinaynaa Hawl wadeenada Komishanka ee u dulqaadanayay culayska illaa maanta ku dhacayay.” Ayuu yidhi Afhayeenka Komishanka.
Afhayeenku waxa uu saxaafadda Somaliland ka dalbaday inay ka feejignaadaan qaybinta natiijooyin mala-awaala oo ay umadda u gudbiyaan inta aanay soo saarin natiijada codbixinta, isago arrimahaa ka hadlayana waxa uu yidhi “Waxa kale, oo aan sheegaynaa maadaama oo waxa kaliya ee la filaa ay tahay natiijadii in Waxaanu ka dardaaraynaa Saxaafadda inaanayy bixin waraaq malo awaal ah oo ay natiijada doorashada cida ku horaysa kaga hadlayaan.”
Previous PostSugitaanka Natiijada Iyo Jawiga Somaliland 24 Saacadood Ka Dib DoorashadaNext PostKomishanka oo ka hadlay wajigii labaad ee doorashada kana digay in la faafiyo warar caydhiin	Blog